श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट, फेसबुक र ट्विटरमा पनि प्रतिबन्ध ! « Pokhara Pati
श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट, फेसबुक र ट्विटरमा पनि प्रतिबन्ध !
कर्फ्यु घोषणा गरिएको श्रीलंकामा श्रीलंका र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्तै अर्को माध्यम ह्वाट्सएप पनि ‘डाउन’ छ । यसको प्रष्ट कारण खुलाइएको छैन । तर, मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘दूरसंचार नियामक आयोगद्वारा निर्देशित’ भन्ने सन्देश पठाइएको छ ।